ဤရွေ့ကားသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူစျေးဝယ်သွားရန်အကောင်းဆုံး7applications များဖြစ်ကြသည် Gadget သတင်း
ဤရွေ့ကားသင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူစျေးဝယ်သွားကြဖို့အကောင်းဆုံး applications များ7ဖြစ်ကြသည်
သိပ်မကြာသေးမီကစျေးဝယ်ခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော်ယနေ့ဖြစ်သည် မည်သူမဆိုသူတို့စမတ်ဖုန်း မှနေ၍ လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဆိုဖာသို့မဟုတ်အိပ်ရာထဲမှထစရာမလိုဘဲဝယ်နိုင်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ virtual စတိုးများပြားလာခြင်းနှင့်အဝေးမှလူများ ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အီလက်ထရွန်နစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလောကသို့မ ၀ င်ရောက်နိုင်ပါကယနေ့သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသမည် သင်၏စမတ်ဖုန်းဖြင့်စျေးဝယ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပ် ၇ ခု ပြီးတော့သင်လိုအပ်တာကိုရှာဖွေရန်စတိုးဆိုင်များစွာကိုကြည့်ရှုရန်မလိုပါ။
2 ကို eBay
ဤစာရင်းသည်အပလီကေးရှင်းအသုံးပြုခြင်းထက်အခြားမည်သည့်နည်းလမ်းကိုမှ စတင်၍ မရပါ အမေဇုံဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်တီထွင်ခဲ့ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကမ္ဘာတစ်လွှားတွင် ၀ ယ်သူအရေအတွက်များပြားသည်။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်သည့် application မှထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ စျေးနှုန်းများ ၀ ယ်ခြင်း၊ အခြားအသုံးပြုသူများ၏ရွေးချယ်မှုများကိုဖတ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
Amazon အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုသည်သူတို့၏စျေးဝယ်ခြင်း၊ ဆန္ဒစာရင်းသို့မဟုတ်အမှာစာသမိုင်းကိုအခြားအရာများစွာမှရယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် virtual store ၏ web version ကိုအသုံးပြုနေလျှင်စျေးကွက်ရှိကွဲပြားသော virtual စတိုးများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သောဤ mobile application နှင့်မည်သည့်ခြားနားချက်ကိုမျှသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင် Amazon mobile application ၏ကောင်းကျိုးများအနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်းကိုဖြစ်သည် Amazon မှကုန်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းကိုသိရှိရန်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏ဘားကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုသည်သူတို့ရဲ့ရရှိနိုင်မှု။ ဤသည်ကဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စတိုးဆိုင်တစ်ခုသို့သွားပြီးစျေးနှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်၊ သင်တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ၀ ယ်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ အမေဇုံသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူသိအများဆုံး virtual စတိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ eBay သည်နောက်ကျကျန်နေသည်မဟုတ်သောကြောင့်နေ့စဉ်လူသိများသောစတိုးဆိုင်မှတဆင့် ၀ ယ်ယူသူသန်းပေါင်းများစွာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားသူများနှင့်များစွာကွာခြားသည်။ အကြောင်းမှာ ၄ င်း၏ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ (သို့) အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းလိုသောအသုံးပြုသူများတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းအများစုအတွက်ရရှိနိုင်သော eBay application မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်နိမိတ်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူရောင်းချနိုင်သည်။ အပလီကေးရှင်းအများစုကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆက်တွဲရှိသည့်ဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်လေလံများနှင့်ဆန္ဒရှိထုတ်ကုန်မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့အားထားခဲ့နိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရောင်းသူဖြစ်ပါက၊ စမတ်ဖုန်းများအတွက် eBay အက်ပလီကေးရှင်းမှသင်ရောင်းရန်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
eBay ကို iOS နှင့် Android ထုတ်ကုန်များမှဒေါင်းလုပ်ရယူရန်လင့်ခ်များဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းမှာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
eBay - အွန်လိုင်းမှာရောင်း ၀ ယ်ပါအခမဲ့
eBay - အွန်လိုင်းစျေးကွက်တွင်ယခုရောင်း ၀ ယ်ပါ
ရေးသားသူ: eBay မိုဘိုင်း
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ၎င်းသည်မကြာသေးမီလများအတွင်းကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကြော်ငြာများနှင့်ဆောင်းပါးများ၏ရောင်းအားကိုပေးသောကြောင့်သင်လုံးဝနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရန် - ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Privalia မိုဘိုင်းအက်ပ်ကိုလည်ပတ်ခြင်း သင်၏အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များ၏ပုံစံ၊ နည်းပညာနှင့်အားကစားများ၏အထူးသီးသန့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုကွန်ယက်များ၏ကွန်ယက်၏အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။.
သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်လျှောက်လွှာကိုသင် download ပြုလုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်အရည်အချင်းအရှိဆုံးသောအထူးလျှော့စျေးများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နေ့စဉ်အခြေခံတွင်သင်၏ကဒ်လှုပ်ခါစေမည့် ၇၀% လျှော့စျေးဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပုဂ္ဂလိကပိုင် - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ခွဲအခမဲ့
သီးသန့်ဖြစ်ခြင်း - 70% ၏အလျင်အမြန်ထွက်ပေါ်လာမှု
သငျသညျလိုလျှင် စျေးဝယ်ခြင်းကိုအကျိုးရှိစွာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည့်နည်းဖြင့်စိတ်မထိန်းနိုင်ခြင်းဖြင့်သယ်ဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်နိုင်သည် အရာများသောအားဖြင့်စျေးဝယ်ထွက်သည့်နေ့တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များစွာသို့သွားရောက်လည်ပတ်သည်ဖြစ်စေ၊ နှင့်အတူ ဆုတောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန္ဒစာရင်းတစ်ခုကိုပြုစုပြီးနောက်သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်ကိုက်ညီမည့်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများကိုထိုင်။ စောင့်နေရမည်။
သင်စိတ်ဝင်စားသောကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကိုမရှာဖွေလိုပါကအခြားသူများကသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်စေလိုသော Wish ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ဆန္ဒစာရင်းကိုဖော်ပြသည်နှင့်ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများသည်ငါ့ကိုထုတ်ကုန်များစတင်ကမ်းလှမ်းပုံကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် Wish ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောကြီးမားသောကောင်းကျိုးများအနက်မှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်စျေးကွက်ရှိအရေးအကြီးဆုံးပလက်ဖောင်းအချို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အား ပို၍ များပြားစေလိမ့်မည်။
Wish - စျေးဝယ်ခြင်းသည်ပျော်စရာဖြစ်သည်အခမဲ့
ဆန္ဒရှိ - မပေးဆောင်ပါနှင့်
ရေးသားသူ: Inc ကဆန္ဒရှိ
လက်ဆောင် ၎င်းသည်အနည်းငယ်သောအသံများပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်သည်၎င်းကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုမသုံးတော့ပါ။ ပြီးတော့ဒါကသေးငယ်တဲ့ဝယ်ယူမှုအတွက်တကယ်အသုံးဝင်သည်။ သင်၏မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများအတွက်လက်ဆောင်ရွေးချယ်ရာတွင် Kado သည်ဥပမာအားဖြင့်စုံလင်လိမ့်မည်။
ဒီ application ကပြောနိုင်ပါတယ် သူ၌ virtual assistant ၏ဝိညာဉ်ရှိပြီးသူသည်လက်ဆောင်တစ်ခုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာကူညီလိမ့်မည် အနည်းငယ်သောနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်ပြည့်စုံသောလက်ဆောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားရှာတွေ့နိုင်မည့်၎င်း၏အသိဥာဏ်ရှိသောအင်ဂျင်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Kado ။ လက်ဆောင်ရှာသူ
ရေးသားသူ: Adrian VIVES SALAR
သင်ဆဲ၏စမတ်ဖုန်း application ကိုမသိလျှင် Groupon သင်၏ပစ္စည်းသည် Virtual Shopping မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်ရာနှင့်ချီသောပစ္စည်းများကိုပေးသောအရည်ရွှမ်းသောအထူးလျှော့စျေးများကြောင့်၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်မှဒေါင်းလုပ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အားသာချက်များကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည် အကောင်းဆုံးသောအထူးလျှော့စျေးကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲသတိပြုမိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ရံဖန်ရံခါ ၇၀% ဖြစ်လာသည်။ သင်ဝေးလံခေါင်သီ။ မသိသောနေရာတွင်နေထိုင်လျှင်ပင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိဆံပင်ညှပ်သမားတစ် ဦး ၏အထူးလျှော့စျေးကိုသင်ရယူနိုင်သည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်မှ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှမည်သည့်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်၊ နေ့စဉ်အခြေခံကျသောလျှော့စျေးအားလုံးကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ Groupon application ကိုသင်ယခု download လုပ်မှသာသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Groupon - ထိပ်တန်းအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်အထူးလျှော့စျေးများ
ရေးသားသူ: Groupon, Inc
အကယ်စင်စစ်ဒီ virtual store ရဲ့နာမည်ကမင်းအတွက်အများကြီးနဲ့တူနေတယ်၊ ​​လူကြိုက်အများဆုံးရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်တွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာကိုအချိန်နည်းနည်းအကြိမ်တိုင်းထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ထားတာအမှန်ပဲ မင်္ဂလာပါ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောရောင်းအားလျှောက်လွှာတစ်ခုမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်၊ မတူညီသောပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကအရောင်းများကိုလည်းရယူနိုင်သည်.
Showroomprive တွင်ဖက်ရှင်အဝတ်အစားများ၊ အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဖိနပ်များ၊ အလှအပသို့မဟုတ်အလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆောင်းပါးများကိုဤပလက်ဖောင်းကိုကွန်ယက်များ၏ကွန်ယက်တွင်အရေးကြီးဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးအဖြစ်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူ 70% အထိဖြစ်နိုင်သည့်ကြီးမားသောပစ္စည်းများအပေါ်အရည်ရွှမ်းသောအထူးလျှော့စျေးများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။
Showroomprive - ပုဂ္ဂလိကရောင်းအခမဲ့
ဤ application အချို့နှင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းမှစျေး ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » အမေဇုံ » ဤရွေ့ကားသင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူစျေးဝယ်သွားကြဖို့အကောင်းဆုံး applications များ7ဖြစ်ကြသည်
ဤအချက်သည်သင် Google I / O 2016 အကြောင်းသိရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးဖြစ်သည်
စမတ်ဖုန်းကိုမျက်နှာပြင်ကြီးကြီးဖြင့် ၀ ယ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်း ၇ ချက်သည်အလွန်ကောင်းသည်